राजविराज विमानस्थल उडान भर्न तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
राजविराज विमानस्थल उडान भर्न तयार
पक्की धावनमार्ग, एप्रोन र ट्याक्सी–वे कालोपत्रे भएपछि वैशाख २० मा परीक्षण उडानको तयारी
वैशाख ९, २०७५ अवधेशकुमार झा
राजविराज — लामो समयपछि राजविराज विमानस्थलको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । पक्की धावनमार्ग, टावर मर्मत, एप्रोन र ट्याक्सी–वे कालोपत्रे भएपछि जहाज उड्ने र अवतरण हुने गरी तयार भएको हो ।
सप्तरीको राजविराज विमानस्थलमा कालोपत्रे गरिएको धावनमार्ग । तस्बिर : अवधेशकुमार
सदरमुकाम राजविराजबाट तीन किलोमिटर दक्षिण विष्णुपुर गाउँपालिकामा विमानस्थल निर्माण भएपछि जहाज चढ्ने सप्तरीवासीको वर्षौंको सपना पूरा भएको छ । एक हजार पाँच सय मिटर लामो र ३० मिटर चौडा धावनमार्ग पक्की भएको छ । ९० मिटर लामो र ६० मिटर चौडा एप्रोन र १ सय १० मिटर लामो तथा २० मिटर चौडा ट्याक्सी–वे कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राजविराज विमानस्थल परियोजना प्रमुख रामएकवाल महतोका अनुसार विमानस्थल परीक्षण उडानका लागि तयारी अवस्थामा छ ।
उनले आगामी वैशाख २० गते बुद्ध एयरले परीक्षण उडान गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘एक–दुई दिन यता–उता हुन सक्छ, तर वैशाख २० मै परीक्षण उडान गर्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ महतोले भने, ‘परीक्षण उडानका लागि बुद्ध एयरको व्यवस्थापनसित कुरा अगाडि बढेको छ ।’
नियमित उडानका लागि भने अझै केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पक्की धावनमार्ग, ट्याक्सी–वे र एप्रोन कालोपत्रे भइसके पनि अहिले टावरको मर्मत कार्य र धावनमार्गको मार्किङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको महतोले जानकारी दिए । २०१६ मा तत्कालीन मन्त्री गणेशमान सिंहद्वारा उद्घाटन भएको केही दिनभित्रै यो विमानस्थलमा सेवा बन्द भएको थियो । कच्ची धावनमार्ग तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण पुन: सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
कच्ची धावनमार्ग र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा विमानस्थल गाईबस्तु चराउने गौचरनमा परिणत भएको थियो । पटक–पटक विमानस्थल निर्माणको मुद्दा अघि बढे पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन । सप्तरीवासीको दबाबपछि सरकारले निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट छुट्याएपछि २०७३ मा टेन्डर भएको थियो । कामका लागि रमण, कान्छाराम, देव एण्ड सायर जेभीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसित सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुरूप ०७४ कात्तिक मसान्तभित्र विमानस्थलको काम सम्पन हुनुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले नसकेपछि चैत मसान्तसम्म समय थपिएको थियो । धावनमार्गको कालोपत्रे गर्ने ‘हटमिक्स प्लान्ट’ बिग्रेपछि चैतको दोस्रो सातातिर काम रोकिएको थियो । तर फेरि दु्रतगतिमा काम भएको छ । ३० करोड ३० लाख ६४ हजार ५ सय २८ रुपैयाँमा पक्की धावनमार्ग, ट्याक्सी–वे, एप्रोन र टर्निङ प्वाइन्ट निर्माण भएको हो । तर विमानस्थलका लागि थप आवश्यक जग्गा खरिद गर्न सकिएको छैन । चौडाइ बढाउनुपर्ने अवस्था छ । धावनमार्गको दुवैतर्फ खाली जग्गा राख्नुपर्ने भएका कारण करिब २२ बिघा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परियोजना प्रमुख महतोले जानकारी दिए ।
पर्यटन मन्त्रालयले उक्त जग्गा खरिदका लागि ५२ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिँदा भने जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । केही दिनभित्रै रकम निकासा भएमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने महतोले जनाए । उनका अनुसार हालको अवस्थामै परीक्षण र अन्य नियमित उडान गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि धावनमार्गको दुवैतर्फ खाली जग्गा राख्नुपर्ने भएका कारण जग्गा खरिद गर्न लागिएको हो । ‘राजविराज विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएर परीक्षण उडानका लागि तयार हुनु सप्तरीवासीका लागि खुसीको कुरा हो,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादवले भने, ‘सप्तरीवासीले वर्षौंदेखि देखेको सपना बल्ल पूरा हुने भयो ।’ सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण प्रधानले विमानस्थलको निर्माणसँगै यहाँबाट नियमित उडान हुन सके जिल्लाको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ०९:१५
साहित्य, कला र संस्कृतिका कुरा
वैशाख ९, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — साहित्य, कला र संस्कृतिको कुरा गर्दा हामी सीमावारिकै परिधिभित्र रहेर कुरा गर्छाैं । सीमापारि के छ यसको खोजी गहिरिएर न हिजो गरिन्थ्यो न आज गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली साहित्य, कला र संस्कृतलाई अत्यन्तै नि:स्वार्थ भावले माया गर्ने मान्छे हिजो पनि थिए, आज पनि छन् ।
सीमापारि उनीहरू विगतमा पनि साधनारत थिए, वर्तमानमा पनि त्यतिकै सक्रिय छन् । सीमापारिका नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका साधकहरूको साधना हेर्दा लाग्छ यी साधना गर्नैका लागि जन्मेका हुन् । यी बिनामूल्यको साधना विगतदेखि वर्तमानसम्म गरिरहेका छन् ।
भारतीय नेपाली साहित्य, कला, संस्कृतिको कुरा गर्दा यसको निकै ठूलो महत्त्व छ, योगदान छ । यस पंक्तिकारसँग भेटमा दुखेसो पोख्छन्– खोइ हाम्रो साधनाको मूल्य ? हाम्रा बोलीमा नेपालीपन छ, उता जुनसुकै भाषा बोले पनि मनभित्र त नेपाली भाषा नै छ । आत्मामा नेपाली संस्कृति, सभ्यताको माया छ । नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई माया गर्नेहरू सीमापारि पनि छन् । हुन त यसको संख्या देश देशान्त नाघेर विश्वभरि फैलिसकेको छ । सबैले आआफ्ना स्थानमा बसेर साधनारत छन् । यो पंक्तिकारको घरमा यस्तै साहित्यिक भावना भएका जनहरूको जमघट हुने गरेको छ । सीमापारिबाट सीमावारिबाट आउनेहरूको संख्या उत्तिकै हुन्छ ।
कुनै सीमाको भन्दा भावनाको कुरो ठूलो हुन्छ । सर्जकहरूको सामीप्यपनमा हामी सीमाका कुरा, भूगोलका कुरा बिर्सिन्छौं । आफ्नो भाषा, संस्कृति, कला, साहित्यका चिन्तनमै रमाउँछौं । यसलाई कसरी माथि उचाल्ने भन्ने चिन्तन गर्छाैं । बहस गर्छाैं । बिस्तारै सिक्किम, दार्जिलिङका नेपाली भाषाका सर्जकहरूको एउटा गन्तव्य धनकुटा पनि हुने क्रममा छ ।
यसका लागि स्थानीय निकाय भनौं वा स्थानीय सरकार उनीहरूको सहजताका लागि विभिन्न भौतिक संरचना, बाटोघाटो निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साहित्यिक क्षेत्रले पनि धनकुटाको उर्वरतालाई उजिल्याउनु आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने धनकुटामा साहित्यिक गतिविधिहरू हिजोको भन्दा बढ्नेछ । देशीविदेशी साहित्यक, कला, संस्कृतिका सर्जकहरूलाई आवतजावत गर्न सजिलो पर्छ, तब स्थापना गर्न सहज हुन्छ ।
हुन त हामीकहाँ साहित्य, कला, संस्कृतिलाई सधैं अनुत्पादक क्षेत्र भनेर उपेक्षात्मक नजरले हेरिँदै आइरहेको छ । तर देशको पहिचान यसैमा छ । सरकारी निकायले यसबारेमा गम्भीर बनेर सोचेको पाइँदैन । बौद्धिक क्षेत्रले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । यो हिजोकै पुरानै सोचाइले हाम्रा कला, साहित्य, संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन । सीमापारी नै बसेर नेपाली साहित्य, कला, संस्कृतिको साधना गर्नेहरू पनि धेरै छन् ।
त्यसमाआफ्नो सिंगो जीवन समर्पण गर्नेहरू पनि धेरै छन् । राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ । तिनका खेलाडीहरूले आआफ्ना तरिकाले खेल खेल्लान् । तर सीमापारि र सीमावारिका मान्छेको भावनात्मक सांस्कृतिक सम्बन्ध यति गाढा छ कि त्यो कुनै पनि शक्तिले तोड्न सक्दैन । यसलाई अझै सुमधुर राख्न दुवै देशका सरकारले हिजोको साँघुरो सोचबाट माथि उठेर यस क्षेत्रको समग्र विकास कसरी हुन्छ, सोच्नुपर्छ ।
प्रतिभा जुन देशको भूगोलभित्र जन्मे पनि उसले त्यो सीमा र भूगोलका कारणले उसले त्यही देशको भूगोलभित्र सीमित भएर बस्नुपर्छ भन्ने सोच आफैंमा गलत हो । उसको देशको राष्ट्रियताले उसलाई थोरबहुत प्रभावित पार्ला तर उसको कर्मक्षेत्र त संसारको जुनसुकै भूगोल हुन सक्छ । जुनसुकै क्षेत्रका राम्रा प्रतिभाहरूले विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेर आफ्नो प्रतिभा तिखार्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा हो यो पंक्तिकारको ।
प्रतिभा खास भूगोल र सीमाभित्रका सम्पत्ति मात्र होइनन्, विश्व समुदायकै सम्पत्ति हुन् । यिनीहरूको संरक्षण विश्वले गर्नु दायित्व हो । हामीले सीमापारि बसेर नेपाली भाषा साहित्यको साधना गर्ने स्रष्टा इन्द्रबहादुर राईलाई भर्खरै गुमायौं । उनको सम्मानमा नेपाली साहित्यकर्मीहरू केहीले बाहेक शोक पनि मनाए । नेपाल सरकारले भने संवेदना विज्ञप्ति पनि निकाल्न कन्जुस्याइँ गर्‍यो । आखिर उनी भारतमा जन्मेर के भयो ? नेपाली भाषा साहित्यकै साधनामा आफ्नो सिंगो जीवन समर्पित गरेर गए । त्यो योगदानलाई सम्मान दिँदा के बिग्रिन्थ्यो नेपाल सरकारको ? सानो सोचाइको धरातलबाट अलि माथि उठेर सोच्दैनौं हामी । विश्वको परिवेशमा कसरी पाइला राख्न सक्ने होला ?
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ०९:१३
सीमाक्षेत्रको बाँधको ढोका भारतले बन्द गर्‍यो, गौर डुबानमा
बिहार जलमग्न भएपछि कोसी ब्यारेजका ढोका बन्द गर्न भारतको दबाब
बाढीका कारण मोरङमा ४ हजार २ सय विस्थापित
राप्तीको बाढीले बस्तीहरु डुबानमा, लमही-कोइलाबास सडक अवरुद्ध
देउवा पक्षको भेलाको निष्कर्ष : एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने
बाढीपहिरो र डुबानले ३० जनाको ज्यान गयो, १३३ जनाको सकुशल उद्धार [अपडेट]